Ethiotelecom ayaa sheegtay inay 100 Milyan oo birr khasaartey - Hargeele - Wararka Somali State
January 9, 2020 117
Shirkada isgaarsiinta Teleefoonada itoobiya ee Ethio-telecom ayaa sheegtay in 6dii bilood ee lasoo dhaafay dhibaatooyinka dhanka horumarinta aas-aasiga uga yimid darteed ay shirkadu khasaartay 100 milyan oo birr.
Maareeyaha guud ee shirkada Ethio-telecom Marwo freehiwot Taamiru ayaa sheegtay in 547 Shay oo qalabka horumarinta aas-aasiga ah ee shirkada loo gaystay dhibaatooyin Xatooyo ah iyo kuwo ulakac ah.
Mareeyaha ayaa sheegtay in, inkastoo ay dhibaatooyinka aaladaha iyo Qalabka Shirkadu lakulmaan ay tuuganimo ama Xatooyo badan, Haddana ay jiraan dhibaatooyin dhanka wadashaqayn la’aan shaqaalaha shirkada ah.
Dhanka kale Marwo freehiwot Taamiru Maareyaha EthioTelecom ayaa cadaysay in iyagana dhibaatooyin kala duwan loogaysto dadka Xarumaha horumarinta Aasaasiga ah iyo qalabka Shirkada ilaaliya.
Sidookale mareeyaha ayaa sheegtay in hadii aan Wada jir looga shaqayn kahortaga xatooyada Shirkada lagu hayo ay mustaqbalka caqabad wayn kutahay Tayada adeegbixinta Ethio-telecom.
Ugu dambayntiina,Maareeyaha guud ee shirkada isgaarsiinta Telefoonada itoobiya Marwo freehiwot Taamiru ayaa sheegtay in Maalmaha soo socda ay xarunta dalka ee addis ababa ay bahwaadta kaladuwan kula yeelanayaan kulan wada xaajood ah oo dhibaatooyinkan Xal waara loogu raadinayo.
Hay’ada laan qeyrta cas ee Jigjiga oo baabuur Ambalaaso ah lagu wareejiyey.
Jaamacada Dir dhaba oo ay ka qalin jabiyeen 63 ardey oo ah ardeyda xiliga xagaaga wax barata.